Dhammaan Tilmaamaha iPadOS | Wararka IPhone
iPadOS, waa magaca heli doona nooca cusub ee nidaamka hawlgalka ee iPad ee la bilaabi doono bisha Sebtembar, waxaa ku jira dhowr tilmaamood oo naga caawin doona inaan hawlaha si dhakhso leh u qabanno oo markaa awood u leh inaan u qabanno shaqadeenna si hufan. Qaar ka mid ah tilmaamahan ayaa horeyba loo yaqaan, laakiin badankooduna waa kuwo gebi ahaanba cusub oo ay ku jiraan hawlo aad u habboon oo aad ogtahay haddii aad rabto inaad u isticmaasho iPad-kaaga wax ka badan inta wax ka cunaysa.
Tilmaamyo muujinaya nuqul, gooyn iyo dhajin iyada oo aan loo baahnayn adeegsiga menus macnaha guud ku jira, ama si loo tirtiro loona celiyo ficilada, loo yareeyo cabbirka kiiboodhka, ama loo doorto eray, oraah, ama sadarka oo dhan Kuwani waa qaar ka mid ah tusaalooyinka waxa aad ku arki karto fiidiyowgaan annaguna waan kuugu sharxi doonaa maqaalkan. Apple ugu dambeyntii waxay na siineysaa nidaam qalliin heer ah waxa iPad u qalmo, ma waxaad ka faa'iideysan doontaa?
1 Xullo qoraal
2 Nuqul, Jar oo dhaji
3 Ka noqo oo Redo
6 Hoos u dhig kiiboodhka
Waxaan iska hilmaami karnaa muraayadda weyneysa ee caadiga ahayd ee soo muuqatay markii la wareegaayo tilmaamaha. Hada waa inaad sameysaa ku taabsii dulqabeha hal farta oo u jiido shaashadda in aan dhigno meesha aan rabno. iPadOS waxay naga caawisaa adoo ogaanaya meesha aan rabno inaan dhigno. Waxa kale oo jira astaamo cusub oo lagu xusho ereyada:
Eray ku hay ilbiriqsi si aad u doorato, ama si toos ah ugu dhufo laba jeer oo isku xigta.
Jiid xulasho si aad u weyneyso ama u yaraysid.
Laba jeer taabo eray si aad u doorato weedha dhan ee ku jirta.
Seddex ku dhufo eray si aad u xulato sadarka oo dhan oo ka kooban.
Waxaad sidoo kale ku qaban kartaa ilbiriqsi hal eray oo kaliya markaas jiidi kartaa si aad u dooratid qoraalka aad rabto. CIyada oo dhammaan tilmaamyadan oo ay la socdaan dariiqooyinka kumbuyuutarka, haddii aan isticmaalno mid dibedda ah, hawsha xulashada qoraalka ayaa si weyn loo fududeeyay, hagaajinta xitaa waxa aan ku qaban karno kumbuyuutar kasta.
Nuqul, Jar oo dhaji
Waan sii wadi karnaa adeegsiga menusyada fikradaha caadiga ah si loo koobiyo oo loo dhajiyo, laakiin sidoo kale hadda waxaan haynaa tilmaamo aan ku qaban karno si dhakhso leh. Mar alla markii aan dooranno cunsurka su'aasha ku jira waxaan sameyn karnaa tilmaanta sedex farood isku dheji si aad u nuquliso. Haddii aan mar labaad ku celino halkii aan ka koobiyeyn lahayn waan jari doonnaa, sidaas darteed way ka baabi'i doontaa meesha ay joogto. Si aan ugu dhejino waa inaan dhignaa tilmaamaha meesha la doonayo oo aan ku qabanno tilmaanta kala-goynta saddexda farood.
Ka noqo oo Redo
Markii aan wax tirtirnay ama wax ka badalnay oo aan dooneyno inaan ka noqono howshaan ugu dambeysay, kaliya waa inaan sameynaa tilmaanta ah inaan bidix ugu boodo seddex farood Haddii aan ku celcelino, waanu ka noqoneynaa wax ka beddelkii ugu dambeeyay ee aan ku sameynay si isku xigxiga (laga soo bilaabo kii ugu dambeeyay ilaa kan ugu da'da weyn). Si aan dib ugu soo ceshano shay aan dib u dhignay waa inaan ku dhaqaaqno tilmaanta: iyadoo seddex farood ka babaneyso bidix ilaa midig.
Waxaan sameyn karnaa dhaqdhaqaaqyo dhaqso ah si aan u dhisno heerarka gundhigga liiska aan abuurnay. Kaliya mari bidix ilaa midig hal far on curiyaha si loo kordhiyo indentation, ama lid ku ah in la yareeyo.
In kasta oo aan maqaal dhan ugu hibayn doonno wax badan oo ku saabsan iPad-ka, haddana waxaa habboon in la ogaado dhaqdhaqaaqyada la xiriira arrintaas. Si loo xiro barnaamij kaliya waa inaan sameynaa tilmaanta shan farood wada saar shaashadda. Haddii aan dooneyno inaan si deg deg ah uga helno howlo fara badan dhammaan barnaamijyada aan furanno, waa inaan ku muquuninaa afar farood.
Hoos u dhig kiiboodhka
Marar badan uma baahnin kumbuyuutar ka weyn kan iPad-ka uu leeyahay asal ahaan, Apple-na waxay na siisaa suurtagalnimada inaan ku yareyno cabbirka kiiboodhka iPhone, si aan awood ugu yeelanno inaan gacan keliya ku qabanno. Waa inaad ku sameysid tilmaam qanjaruufo labada farood kumbuyuutarka oo aan arki doonno sida loo dhimay, oo na siinaya shaashad bilaash ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 13 » Dhammaan tilmaamaha iPadOS
Barkadda Dr. Panda waxaa lagu heli karaa bilaash wakhti xadidan